मध्यपहाडी लोकमार्गको उद्गम खण्ड कालोपत्रे हुने भएपछि स्थानीयवासी खुशी « Mechipost.com
मध्यपहाडी लोकमार्गको उद्गम खण्ड कालोपत्रे हुने भएपछि स्थानीयवासी खुशी
प्रकाशित मिति: ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार २१:१०
पाँचथर, ३० असोज
याङवरक गाउँपालिका वडा नं. १ मेजरडाँडामा गाई गोठ राखेका भक्तराज बेघा लिम्बू नजिकैको सडक कालोपत्रे हुने भएपछि दङ्ग छन् । “अब हाम्रो घ्यू, छुर्पीले राम्रै भाउ पाउने भयो”, लिम्बूले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म गाडीकै समस्या थियो ।”
लिम्बूको गोठ नजिकैबाट विस्तार भएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको ट्र्याक खोलिएको आठ वर्ष भयो । खोलिएको ट्र्याक पनि आधाजसो मात्रै बाँकी छ । कतै भित्तोले पुरेको छ त कतै छेउ लडेको छ ।
लोकमार्गको उद्गम विन्दु भएपनि यहाँ हालसम्म ट्र्याक विस्तार र कालोपत्रे हुन नसक्दा स्थानीयले समस्या भोग्दै आएका थिए । तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले लोकमार्गको उद्गम विन्दु क्षेत्रको कालोपत्रेका लागि बजेट छुट्ट्याएपछि स्थानीयवासी खुशी भएका हुन् ।
ट्र्याक खोलिएको लामो समयपछि सडक कालोपत्रे हुने खवरले आफूहरुलाई बल्ल सडक आइपुग्न लागेजस्तो अनुभूति भएको याङवरक–१ हर्कटेका ताराबीर राईको भनाई छ । “ट्र्याक खोलिएपनि भनेको बेलामा सवारी आउन नसक्ने अवस्था छ”, राईले भन्नुभयो, “कहिलेकाँही भोकै बस्नुपर्ने अवस्था पनि आयो ।”
विगतमा जस्तो भरिया नपाइने र सवारी समेत नचल्ने समस्याले उच्च पहाडी क्षेत्रका स्थानीयवासी अहिलेसम्म समस्यामै बस्नु परेको राईको भनाई छ । जतिसक्दो छिटो सडक कालोपत्रेको काम सुरु हुनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । “चाँडो भइदिएदेखि हामीलाई राहत मिल्थ्यो”, राईले भन्नुभयो ।
याङवरक गाउँपालिका वडा नं. ४ दारिम्बाबाट लोकमार्गको ५३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन बाँकी छ । नेपाल–भारत सीमावर्ती चिवाभञ्ज्याङबाट लोकमार्गको सुरुआत भएको छ । चिवाभञ्ज्याङसम्म भारत सरकारले पनि सडक निर्माण गरिरहेको छ ।
भारततर्फ समेत सडक निर्माण भएपछि दुवै देशका उच्च पहाडी क्षेत्रका स्थानीयलाई सामग्री आयात–निर्यातमा सघाउ पुग्ने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ । “सिक्किमबाट चिवाभञ्ज्याङ जोडिएपछि पारस्परिक सम्बन्ध रहेका हामीलाई धेरै सुविधा मिल्छ”, राईले भन्नुभयो, “कालोपत्रेको काम सुरु भयो भने कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको त्रासका कारण गाउँ आएका युवाले समेत रोजगारी पाउँछन् ।”
चिवाभञ्ज्याङबाट नजिकैको बजार च्याङथापूका ब्यवसायी गंगाराम गौतम सडक कालोपत्रे भई चिवाभञ्ज्याङ नाका सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने वताउनुहुन्छ । सडक कालोपत्रे भए यहाँ धेरै सम्भावनाका ढोकाहरु खुल्ने गौतमको भनाई छ । “चिवाभञ्ज्याङ सहित फालोट, तिम्बुपोखरी, लामपोखरी लगायत पर्यटकीय क्षेत्रहरुसम्म पुग्न सहज हुन्छ”, गौतमले भन्नुभयो, “अहिले त ट्र्याक मात्रै छ ।
सवारी सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ ।” पाँचथर र ताप्लेजुङको सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासीको भारतको सिक्किमसँग कुटुम्बेरी सम्बन्ध समेत रहेको छ । आफन्तकहाँ आवत–जावतमा कठिनाई भोग्नुपर्ने समस्या चाँडै हल हुनेमा स्थानीयवासीको विश्वास छ । “हाम्रै जिल्लाका सांसद् मन्त्री भएपछि सडक कालोपत्रेका लागि बजेट प्राप्त भएको सुनेका छौँ”, गौतमले भन्नुभयो, “यो हाम्रा लागि साह्रै खुशीको विषय हो ।”
याङवरक–१ चित्रेका नरबहादुर बेघा पनि सडक कालोपत्रे नहुँदा सवारी अवरुद्ध भई समस्या ब्यहोर्नुपरेको सम्झनुहुन्छ । “यत्तिका वर्ष भयो, पिच (कालोपत्रे) हुने कुरा मात्रै भयो”, बेघाले भन्नुभयो, “अहिले बजेट नै छुट्टिएको सुन्यौँ । अब पक्कै पिच होला ।” कालोपत्रे सडक नहुँदा ५३ किलोमिटर कच्ची सडक पार गर्न तीन घण्टासम्म समय लाग्छ ।
वर्षा भए सवारी सञ्चालन अवरुद्ध हुने गरेको छ । लोकमार्गका उद्गम विन्दुमा सुरुआतमै ट्र्याक खोलिएपनि कालोपत्रे नभएको भन्दै केही समयअघि स्थानीयवासी आन्दोलित समेत भएका थिए । उद्गम विन्दुको खण्ड कालोपत्रेको काम चाँडो सुरु हुनुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको माग छ ।
“यो खण्ड कालोपत्रे भए हामीकहाँ अरु धेरै सम्भावनाहरु खुल्दछन्”, याङवरक–१ का वडाध्यक्ष मोहनकुमार ढुङ्गेलले भन्नुभयो, “पर्यटन प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनको बजारिकरण, सीमाको सुरक्षामा सहज सडक पहुँचले मद्दत गर्छ ।”
याङवरकबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका सदस्य नरबहादुर गुरुङ सुरुआतमै ट्र्याक खोलिएको र लोकमार्गको उद्गम विन्दु रहेको क्षेत्रमा कालोपत्रेमा ढिलाई हुनु आफैँ दुःखद् भए पनि यस वर्ष बजेट छुट्टिएपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएको वताउनुहुन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त खण्ड कालोपत्रे सहित मध्यपहाडीको पूर्वी खण्डका रु. आठ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।